Indawo: Ikhaya » Ukuthumela » Izwe | Isifunda » Italy » Ungayinqanda Kanjani Ingozi Yokuqokwa kukaBerlusconi e-Italy
Isithombe sihlonishwa ngu-Mathieu Cugnot, uMdali, © European Union 2019
Iqembu lonke lezepolitiki eliphakathi kwesokudla liyaphikelela ngokusemthethweni ekuqokeni u-Silvio Berlusconi ku-Quirinale. Lokhu kukodwa kuyindaba engathi sína, okufanele iphathwe kanjalo, ngale kwamaqhinga noma ukulwa.
USilvio Berlusconi uyingcweti yezindaba yase-Italy kanye nepolitiki ebisebenza njengo UNdunankulu wase-Italy kohulumeni abane kusukela ngo-1994-1995, 2001-2006, kanye no-2008-2011. Ngendlela asebenzise ngayo izikhungo namandla akhe, uBerlusconi wayengumholi wezepolitiki owabeka engcupheni intando yeningi yenkululeko, ngemuva kukaDonald Trump, eNtshonalanga. Futhi wephula ngokuhlelekile izimiso zayo, kubhala u-Emanuele Felice, intatheli e-Domani yansuku zonke.
Uma ekhethwa namuhla ubezokhethwa ngoba ethweswe umqhele ngabaholi ababili abafana noSalvini noMeloni abaphumela obala bekhuluma ngentando yeningi ka-Orban, uPutin noTrump. Umphumela onjalo ungaba ihlazo eRiphabhulikhi yase-Italy, ngenxa yezizathu zokuziphatha nezombusazwe nezokwahlulela ngokwemvelo. Kungaba uphawu lokuwa kwesikhungo sethu esiphakeme kakhulu nesiyigugu kakhulu, ukusuka esivikelweni sesiqinisekiso kuya ethuluzini lokuvela kwezwe lethu ngendlela engafanele, kusho uFelice.
Manje, ukuze ubambe izimpawu ezikhona, kubonakala kuyisenzakalo esingenakwenzeka. I-front creaks, kukhona umehluko, isibonakaliso sokuthi izinombolo zinzima. Kodwa naphezu kwalokhu, abalingani bayaqhubeka nokumeseka ngokusemthethweni, ngaphezu kwalokho ngokudelela okuthile (bacela uBerlusconi ukuthi "ahlakaze indawo egcinwe kuze kube manje" ngemva komhlangano endaweni yakhe yokuhlala).
Kuyiqiniso elikhuluma kakhulu ngesimo sesikhungo-kwesokudla esinakho e-Italy. Ungeza iziqinisekiso ngesimo sabaholi abafana noMatteo Salvini noGiorgia Meloni. Ngaphandle kukaBerlusconi ngokwakhe, owokuqala okufanele aqaphele isimo futhi esikhundleni salokho uphoqelela izwe kulolu vivinyo olunamahloni futhi oluyingozi, kithi sonke, phambi kwezwe lonke - nangomzuzu onjalo.
Ngakho-ke i-centre-right yase-Italy iqinisekisa ukuthi ayinangqondo kakhulu, iyingozi, futhi ayinasibopho.
Njengakwelinye izwe eNtshonalanga Yurophu (mhlawumbe okuwukuphela kwesiqhathaniso esisekhona yileso sase-United States, lapho amaRiphabhlikhi engowakwaTrump).
Abaphakathi kwesokunxele kufanele bagweme ukwenza iphutha elibulalayo. Susa u-Berlusconi futhi uvotele elinye igama lesikhungo sokudla, elingasho “uqhekeko.” Umphumela onjalo usazoba ukunqoba kuka-Berlusconi kanye nabo bonke abamaphakathi-kwesokudla, lesi sikhungo-kwesokudla. Kungasho ukwamukela ukuthi kungenzeka uBerlusconi njengesiqalo sezingxoxo.
U-Pd no-Cinque Stelle kufanele futhi bagweme iphutha eliphambene futhi bazigxilise ekuthukutheleni. Mhlawumbe uphakamise ikhandidethi yefulegi, ngaleyo ndlela uvumela umbono we-Italy ehlukaniswe kabili lapho iqembu ngalinye, ngemuva kwakho konke, linelungelo lokuvunyelwa futhi liye lapho kungqubuzana khona engozini yokulahlekelwa.
Kudingeka ukusabela ngokugxila esimeni sokuvelela esiphezulu kakhulu, esingabalelwa kuzo zombili izinhlangothi futhi okwaziyo ukungena phakathi kwabavoti abalungile abaphakathi nendawo abadidekile. Ungumuntu okwaziyo ukunqoba ngaphandle kokuvuma izingxoxo nalabo ababeka engcupheni izikhungo zethu eziphakeme kodwa ngaphandle kokuzidela ekufakazeni.
Inothi Lombhali: Ukuthambekela okuvamile kosopolitiki abaningi nabezindaba kuMnu. Berlusconi kuyabandlululwa ngokuba kubi.
Lesi sihloko siwucezu lombono wombhali.
Izindaba eziningi mayelana ne-Italy
Europe Italy I-Western Yurophu
I-Fraport imisa ibhizinisi layo e-St
I-Global Coated Fabrics Yokuzivikela Ukuze Ihlale Iphakeme...
Indiza entsha esuka eSan Jose iya e-Eugene, Oregon nge...